Hlanza umshini wepali we-pole gutter telescopic pole
Isigxobo singakusiza ukuthi ufinyelele imisele enzima kakhulu ukuyihlanza. Izinduku zethu zokuhlanza ziyahlukahluka futhi azikhawulelwanga ekuhlanzeni i-vacuum. Vele ushintshe ikhanda lebhulashi, singahlanza ifasitela ngamamitha angama-85 ngaphezu komhlaba.
I-Plain 3K Carbon Fibre Tube Yogubhu Lokuhlanza Ukumelana Nokugqwala
Sinemikhiqizo yokuhlanza i-gutter yezindawo ezahlukene futhi samukela ukwenza ngokwezifiso.
Ipali ingakusiza ukuthi ufinyelele okunzima kakhulu ukuhlanza i-gutter, kusuka emafulethini amancane kuya kumabhizinisi amakhulu.
I-Fiberglass Gutter Vacuum 15ft Water Fed Window Yokuhlanza Pole
Izigxobo ze-fiberglass zilula ngesisindo, okwenza ukufakwa kube lula futhi ngeke kuhehe umbani noma kuqhube ugesi.
Isigxobo sokuhlanza i-gutter esingu-30mm, iPole Yokuhlanza Iwindi Elide
Sinemikhiqizo ye-gutter yokuhlanza i-gutter yobubanzi obuhlukile futhi samukela ukwenza ngokwezifiso.Ipali ingakusiza ukuthi ufinyelele okunzima kakhulu ukuhlanza i-gutter, kusuka kumafulethi amancane kuya kumabhizinisi amakhulu. Singakwazi ukuhlanza i-gutter noma uphahla olungafika kumamitha angama-85 ngaphezu kwezinga lomhlabathi.
25Ft umsele wokuhlanza isigxobo sefasitela lokuhlanza isibonakude
Sinemikhiqizo yokuhlanza i-gutter yobude obuhlukile futhi yamukela ukwenziwa ngokwezifiso. Ipali ingakusiza ukuthi ufinyelele okunzima kakhulu ukuhlanza i-gutter, kusuka emafulethini amancane kuya kumabhizinisi amakhulu.